Raha fanatsarana izay ve no maika ? Raha fanakonana ny vita teo aloha izany ve no atao aton-draharaha kanefa jereo no manjo antsika ? Azo hatsaraina io fa izany ve no maika? Jereo ny EPP Mahabibo, izao noravana ny Gymnase ao Mahajanga. Enga anie ho vita. Haingana be ny mandrava, fa ny manorina sarotra, hoy i Rivo Rakotovao. Maro ny zavatra maika raha ao Mahajanga: mijaly rano, mijaly ny ankizy amin’ny EPP fan a tabilao aza tsisy, mijaly I Tsararano tsy misy lakandrano,… hoy ity filohana andrim-panjakana ity. Ny taona 2016 izay nisian’ny fikaonan-doha tamin’ny mpamatsy vola isika vao nahavita nanadio hoe efa tsy tetezamita intsony izahay fa efa vita ny fifidianana ny 2013. Maro ireo fotodrafitrasa efa vita tamin’ny fitondrana teo aloha hoy izy na dia novoizina foana aza fa tsy nahavita na inona na inona ny fitondrana Rajaonarimampianina. Ireo fotodrafitrasa ngezabe hitantsika, toy ny seranam-piaramanidina, ny làlana manodidina an’Antananarivo, ny làlana Ambohitrimanjaka, ny làlana Ambanja-Diego, ny làlana Ambilobe-Vohémar,… Raha tena tsy nanao na inona na inona tokoa ve ny fitondrana tarihin’ingahy Hery Rajaonarimampianina dia inona no natao teto herintaona sy tapany ? Mandoko trano ? hoy I Rivo Rakotovao. Mitohy foana ilay serasera hoe tsy nanao na inona na inona ingahy Hery Rajaonarimampianina. Nanao izy matoa misy zavatra tokanana, zavatra vita, zavatra tohizana,… Tombony izany ho an’ny firenentsika fa hadalan’izay miezaka foana hoe rehefa tonga eo amin’ny fitondrana, dia hoe tsy nisy na inona na inona teo alohanao, hoy ity mpitarika ny HVM ity.
Mahakasika ny valanaretina dia hita fa niakatra ny ezaka natao amin’ny resaka fitsirihana na dia mbola hita ihany aza ny tandrevaka ny amin’ny fifehezana ny olona ka mahatonga ny fitomboan’ny tahan’ny olona voa. Tokony hahay hiano sy handray ny hevitry ny besinimaro ny fitondrana. Manahirana izao ny hoe «stade 1 » sa «stade 3 », izay nifanohitra ny voalazan’ny Filoha sy ny Minisitra, hoy i Rivo Rakotovao.